Xildhibaan Sakariye: Aqalka Sare waxaan ka codsanaa iney joojiyaan Xeerka Bangiga ee ka soo gudbay Golaha Shacabka – Kalfadhi
MUQDISHO, 17 JAN 2019 (KALFADHI)-Weli waxaa taagan doodaha ku saabsan Xeerka waxkabadalka maamulka Bangiga dhexe oo 14-kii bishaan ay meel mariyeen Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. Xeerka ayaa ogolanayo in qof kasta Soomaali iyo Ajnabi, Gaal iyo Muslim ay u tartami karaan jagada Guddoomiyaha Bagiga dhexe ee Soomaaliya.
Inkastoo uu soo xirmay Kalfadhiga 4-aad ee labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadane waxaa jira Xildhibaano arintaan weli si kulul uga hadlaya. Xubnahaan ayaa isku dayaya in uusan dhaqan gelin Xeerka waxkabadalka maamulka Bangiga dhexe iyagoo u maraya Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo aan weli la horgeynin Xeerkaan.
Waxaa jira walaac kale oo sheegaya in Xeerkaan waxkaabdalka maamulka Bangiga Dhexe ee ka soo gudbadya Golaha Shacabka in aan lageyn doonin Aqalka Sare oo toos loogu gudbin doono Madaxweynaha Soomaaliya. Hadii ay sidaasi dhacdo waxaa meesha ka baxaya dagaalka Xildhibaanada weli diidan Xeerkaan ee codsiga u jeedinaya Aqalka Sare, si aysan u siinin codka ansixinta.
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah Xubnaha sida weyn uga soo horjeeda ayaa Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ka dalbaday iney joojiyaan Xeerkaan ka soo gudbay Golaha Shacabka. Waxa uu ka dalbaday iney badbaadiyaan Qaranka iyo Sharafta aqoonyahaanka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay.
“Hadii 275 Xildhibaan codka siiso xitaa Ansax maahan, Aqalka Sare waxaan ka codsanayaa iney ka hortagaan Xeerkaan ka soo fakaday Golaha Shacabka”, ayuu yir Xildhibaan Maxamuud Xaaji Cabdi.
“Macquul maahan in Sharafta aqoonyahaanka iyo tan muwaadinka meel looga dhaco, waxaan ku kalsoonahay Aqalka Sare iney baajin doonaan qorshahaan aan laga fiirsan”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi.
Waxaa jira kulamo kale oo u socda Xubnaha ka soo horjeeda Xeerkaan ka gudbay fadhigooda oo doonaya iney isticmaalaan gacanta Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya si loo baajiyo Xeerkaan.
Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac ayaa oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ah Xubnaha Aqalka Sare iyo Madaxweynaha ugu baaqaya in aysan ansixin go’aanka waxkabadalka Xeerka Maamulka Bangiga Dhexe.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadad Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi waxaan ka codsanayaa in uusan saxiixin Xeerkaan”, ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Isniintii todobaadkaan ayaa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxay Ansixiyeen waxkabadalka Xeerka maamulka Bangiga dhexe ee Soomaaliya, warar soo baxaya ayaa jira oo sheegaya in qof Ajnabi ah laga dhigi doono Guddoomiyaha Bangiga dhexe waana hadal heynta wali ka taagan Soomaaliya, gaar ahaan mgalaaada Muqdisho.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise: Qadar waxay Faraxad gelisay Ciidanka Soomaaliyeed, mana ilaabi doono